Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Ny faritany renivohitra ostraliana dia miditra amin'ny fikatonan'ny COVID feno
Airlines • Airport • Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny renivohitra Aostralianina dia miditra amin'ny fikatonan'ny COVID feno
Amin'ny alàlan'ny fanidiana, ny mponina ao Canberra sy ny manodidina azy dia avela hiala ny trano noho ny antony lehibe ao anatin'izany ny asa tena ilaina, ny fitsaboana, ny fanendrena vaksinina, ny fivarotana enta-mavesatra ary ny fanaovana fanatanjahan-tena adiny iray isan'andro.
Ny renivohitra Aostralianina dia nandrakitra ny tranga COVID-19 vaovao voalohany tao anatin'ny herintaona.
Ilay lehilahy dia nifindra tamina fiarahamonina tsy nisy loharanom-pahalalana fantatra.
Hihidy mandritra ny fito andro ny faritany manomboka amin'ny 5:00 hariva ora eo an-toerana ny alakamisy.
Andrew Barr, lehiben'ny minisitry ny Terre renivohitra Aostralianina (ACT), dia nanambara fa hidina am-baravarana ny faritany aorian'ny firaketana ny raharaha COVID-19 vaovao voalohany tao anatin'ny herintaona.
Hijanona hafitoana ny ACT manomboka amin'ny 5:00 hariva ora eo an-toerana ny alakamisy lasa teo taorian'ny fitsapana ny lehilahy iray manodidina ny 20 taona ho voan'ny virus coronavirus.
The Australian Capital Territory Nilaza ny fahasalamana fa areti-mifindra eo amin'ny fiarahamonina ity lehilahy ity ary tsy misy loharanom-pahalalana fantatra.
Ity no tranga voalohany an'ny COVID-19 hita tao amin'ny fiarahamonina ACT tao anatin'ny 12 volana mahery.
"Ity fanapahan-kevitry ny fanidiana ity dia vokatry ny tranga tsara iray tany amin'ny faritany, tranga iray dia voan'ny virus teo amin'ny fiarahamonina," hoy i Barr. "Tsy fantatray izao ny niavian'ny aretina, fa efa an-tapitrisany ny fanadihadiana efa natao."
"Ity no risika lehibe indrindra mahazo ny fahasalamam-bahoaka atrehantsika eto amin'ny faritany amin'ity taona ity, hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana," hoy izy nanampy.
Jesse Chang hoy:
12 Aogositra 2021 amin'ny 14:05
Ny tanàna hafa manerantany dia tokony hianatra avy amin'ny ACT!